Gaadh ilaa $500 qofkiiba
oo aad kusoo darto FXPRIMUS!
Keen asxaabtaada oo dib hel
lacag cadaan ah
Xayeysiiskayaga Keen Saaxiib
, waxaad heli kartaa ilaa
iyo $500 oo aad ku ganacsan kartid,
la bax lacagta saaxiib kasta
oo furta akoon oo bilaaba ganacsi.
SIDA AY U SHAQEYNAYSO
U dir link-gaaga khaaska
Asxaabtaadu akoon ayey naga
furanayaan waana ku ganacsanayaan
Waxaanu hubinaa in ay buuxiyeen
shuruuda waxaananu ku shubnaa akoonkaaga
LACAG DHIGASHADA HORE
KAASHKA ABAALMARINTA AH
Halka laga helo Link-gaaga Keenista ee Khaaska ah
Link-gaaga Keenista Khaaska waxa laguugu soo diray iimaylka.
Waxaad sidoo kale ka heli kartaa adoo galaaya Qeybta Xubinimada ee FXPRIMUS (Member's Area).
Keen asxaabtaada maanta!
Heshiisyada & Shuruudaha
This website is operated by Primus Africa (Pty) Ltd, a member Company of the FXPRIMUS Group